आफु भन्दा २५ बर्ष जेठा शेरधनसंग बिवाह गर्ने लागेकी ज्याङ्मुको यस्तो रहेछ इतिहाँस, सगरमाथा चढ्ने सपना यसरि फेल भएको रहेछ ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाज/आफु भन्दा २५ बर्ष जेठा शेरधनसंग बिवाह गर्ने लागेकी ज्याङ्मुको यस्तो रहेछ इतिहाँस, सगरमाथा चढ्ने सपना यसरि फेल भएको रहेछ !
मोडल जाङ्मु इन शेर्पा २०१९ मा सगरमाथा आरोहण गर्ने तयारीमा थिइन् । यसका लागि उनी सगरमाथा आधार शिविर पनि पुगिन् । ‘हाइ अल्टिच्युड टेस्ट’का लागि शिविर पुगेको केही महिनामै मिस मंगोलमा भिडिन् । मिस मंगोल–२०१८ को विजेता बनिन् उनी । मिस मंगोलको ताज जितेसँगै लक्ष्यको बाटो मोडियो । त्यसपछि सगरमाथा आरोहणको कार्यक्रम थाँती राखे र असहाय बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम योजना अघि सारिन् ।